October 2016 - Page 2 of 16 - Puntland Mirror Believable Media Website
Haayada Caalamiga ah ee Laanqayrta Cas oo cuno iyo alaabaha guryaha gaarsiisay 60,000 qof oo ku barakacay dagaalka Gaalkacyo
October 29, 2016 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Kadib dagaalo culus oo ku dhexmaray magaalada Gaalkacyo ciidamada dowlada Puntland iyo kuwa maamulka Galmudug, haayada Caalamiga ah ee Laanqayrta Cas (ICRC) iyo haayada Bisha Cas Soomaaliya (SRCS) ayaa u qaybiyay, bariis, digir […]
Xeer ilaaliye ku-xigeenkii maxkamada ciidamada qalabka sida ee DFS Cabdulaahi Mayoonge oo u geeriyooday dhaawac dhawaan soo gaaray
October 28, 2016 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xeer ilaaliye ku-xigeenkii maxkamada ciidamada qalabka sida ee dowlada federaalka Soomaaliya, Cabdulaahi Xuseen Maxamed (Mayoonge) ayaa maanta oo Jimce ahayd ku geeriyooday isbitaal kuyaala caasimada Soomaaliya ee Muqdisho kadib dhaawac uu la jiifay muddo […]
October 27, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
London-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 3,800 qof oo qaxooti ah ayaa ku dhimatay badda Mediterranean-ka iyaga oo isku-dayayay in ay gaaraan Yurub ilaa iyo sanadkan, taasoo ka dhigaysa 2016-ka sanadka ugu dhimashada badnaa diiwaanka, sida ay […]
October 26, 2016 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Maleeshiyada ISIS ayaa ka baxday magaalada Qandala ee gobolka Bari ee Puntland kadib markii ay qabsadeen, sida ay cadeeyeen dadka deegaanka. In ka badan 50 maleeshiyada ISIS ah ayaa qabsaday magaalo xeebeedka subaxnimadii […]
Garowe-(Puntland Mirror) ISIS militants have pulled out from Qandala in Bari region hours after they captured the town, residents confirmed. More than 50 militants of ISIS had captured the coastal town on Wednesday morning without […]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Dagaalyahano hubaysan oo katirsan garabka ISIS ee Soomaaliya ayaa la wareegay magaalo xeebeedka Qandala ee gobolka Bari ee Puntland, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo saraakiisha. Duqa Qandala, Jaamac Maxamed Khuurshe ayaa saxaafada […]
Bosaso-(Puntland Mirror) Heavily armed fighters from ISIS’s wing in Somalia took control of Qandala port town in Bari region of Puntland, residents and officials said. The mayor of Qandala, Jama Mohamed Khurshe told to the […]
Al-Shabaab oo la wareegtay magaalada Tiyeeglow kadib markii ay ka baxeen ciidamada Itoobiya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dagaalyahano hubaysan oo katirsan Al-Shabaab ayaa la wareegay magaalada Tiyeeglow ee gobolka Bakool maanta oo Arbaco ah kadib markii ay ka baxeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowlada Soomaaliya, sida ay sheegeen dadka deegaanka. […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) Heavily armed fighters from Al-Shabab have seized control of Tiyeglow town in Bakol region on Wednesday morning after Ethiopian troops and Somali government forces pull out, residents said. According to the residents, Most […]
October 26, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Washington-(Puntland Mirror) Murashaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa sheegay in qorshaha siyaasada Hillary Clinton ee gudaha dalka Suuriya uu sababi karo Dagaalka Saddexaad ee Aduunka. Waxaa uu sheegay in Maraykanka uu diirada saaro garaacida waxa […]
Xasan Shiikh oo u safray Addis Ababa si uu uga qeybgalo shirka IGAD
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa u duulay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya maanta oo Jimce ah. Xasan Shiikh ayaa Addis Ababa kaga qeybgali doona shirka urur goboleedka IGAD oo beri [...]
Wasaarada waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland oo aqoonsigii waxbarashada kala noqotay tuulada Qarxis
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasaarada waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlada Puntland ayaa sheegtay in ay aqoonisgii xarunimada kala noqotay tuulada Qarxis oo hoostagta degmada Eyl ee gobolka Nugaal. Bayaan ay soo saartay maanta oo Isniin ah [...]